Raharaham-pirenena “Tsy azo hajanona ny fitoriana ny filazantsara ”
Ny 3 jona 2018 no niditra an-tsehatra teo amin’ny hira ny mpanakanto Harilanto, hoy ny rainy,
Lalaina Ratsirahonana. Miisa 20 eo ny hirany ankehitriny saingy mbola any amin’ny volana oktobra kosa vao ho avy ny rakikira vaovao. Mikasika ny hetsika ato ho ato, ankoatr’ireo fanasan’ny fiangonana dia eo koa ny fanasan’ny komitin’ny ivontoeran’ny sinodam-paritanin’Antananarivo Andrefana ny 3 mey izao. Fitoriana ara-pilazantsara amin’ny alalan’ny hira moa ny azy ary raha hampifandraisina amin’ny raharaham-pirenena dia misy iny ny hira mitondra ny lohateny hoe “Madagasikara” iny. Ny fisehoany rehetra dia tsy maintsy miafara amin’io hira io sy fitondrana am-bavaka ho an’ny firenena. Ny toe-draharaham-pirenena no anton’io hira io ary tsy azo hajanona ny fitoriana ny filazantsara, hoy hatrany ny tenany.